प्रकाशित: शुक्रबार, फागुन २, २०७६, १६:३९:४० नेपाल समय
काठमाडौं मोडेल सेकेण्डरी स्कुल, बालकुमारी ललितपुरको आयोजनामा पाँचौं संस्करणको राष्ट्रिय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता २०७६ सम्पन्न भएको छ । विद्यालयले विगत २०७२ सालदेखि निरन्तर वार्षिकरूपमा प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।
विद्यालय तहका कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका ३० वटा विद्यालयका ८५ जना विद्यार्थीहरू प्रतियोगितामा सहभागी भएका थिए । उक्त प्रतियोगितामा पाठशाला नेपाल फाउण्डेशनकी नस्वा जोशी प्रथम भएकी छन् । उनले रु. २०,००० सहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी छन् ।
सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलका स्पन्दन बोहोरा द्वितीय हुन सफल भए । उनले रु. १२,००० सहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । यसै गरी ज्ञाननिकेतन स्कुलकी करिश्मा थापाले तृतीय स्थान प्राप्त गर्दै रु. ८,००० र प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन् ।
सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्नेमा केएमसी स्कुलकी ईराशु कार्की, बि.डी एस. स्कलकी एइभा आचार्य, अवयर्नेश इन्टरनेशनल एकेडेमीकी भावना अर्याल, ब्लु बर्ड सेकेण्डरी स्कुलका फिरोज आफ्रिन र काठमाडौं जेभिएर स्कुलका स्वच्छन्द अधिकारी रहेका छन् ।
मोरङका ६ स्थानीय तहका स्कुलमा पढाइ सञ्चालन
कोरोनाले रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्रिविको तयारी, केही दिनमै तालिका निकाल्ने